Cannes mutsvuku mutsvuku: maitiro akawanda anotora maziso - vanhu - TELES RELAY
HOME » VANHU & VANHU »Cannes mutsvuku mutsvuku: maziso akawanda anotora maziso - vanhu
Cannes mutsvuku mutsvuku: maziso akawanda anotora maziso - vanhu
CANNES, France, 16 (Reuters) - Elton John, uyo aipfeka rapier chitundumuseremusere "etc." riri lapel wake, akafamba tsvuku kapeti muna Cannes neChina kunopinda kuratidzwa rake biopic "Rocketman". 19659002] Firimu, iyo inotarisa Taron Egerton, inorondedzera matanho ekuimba emimhanzi mumakambani emimhanzi, kubva pakuedza kwake kuedza piyano somwana, kubva pakuputika kwake chiitiko cheAmerica uye nyika yaro yemafaro yakasvibiswa nemishonga uye doro.
Kunyange zvazvo asiri mukushandira kwezvikomborero, kuimba uye kutamba nziyo dzaJohn dzinonyanya kuzivikanwa ndeimwe yezvakatarisira kuongorora kuCôte d'Azur Film Festival.
Achiperekedzwa nemurume wake David Furnish, John akakumbira vateereri. iri pedo nekuparadzirwa kwemasikati akafanana nemasikirwo akafanana nemoyo yakavezwa nezvishongo
Kutungamirirwa Dexter Fletcher, uyo akashanda Egerton mu "Eddie The yeGondo", iro biopic ane Zvisaririra zvetsika Hollywood musicals pamwe kutamba mitambo kuiswa mune fairground kana pasi Dj In Vapar John, panguva yekutsvaira, muimba.
Iyi firimu inopinda muukama hwakaoma hwemuimbi "Crocodile Rock" nababa vasina hanya uye amai vane utsinye, uyewo muhukama hwekutanga hunotyisa hunoita kuti awire mukutendeseka. 19659002] Asi anopembererawo humwe hukama hwaJohn husingaperi, kusanganisira Bernie Taupin, uyo akanyora mazwi echirwere chake chikuru, kusanganisira "Rwiyo Rwako," iyo yakabatsira kufambisa muimba kuti ave mudara.
Taupin aivawo riripo kuongorora, apo vazhinji - kusanganisira vatambi Eva Longoria, Julianne Moore uye Shailene Woodley - maoko panopera mutambo, apo Egerton, akatamira, akanga misodzi.
(Gwaro raSara White muCannes, Rakagadzirwa naKevin Liffey naMateu Lewis)
PHOTOS. Cannes 2019: Penélope Cruz, Amber Heard ... relive kukwira kwezvikamu zve 17 mai
Royal Wedding 2019: Mucheche waGabella Gabriella, Maud Windsor, anogona kunge ari chikwata chekuita